June 2021 - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
How did the third wave of Covid start?
Covid တတိယလှိုင်းဘယ်လိုစလာနိုင်လဲ ကျွန်တော်တို့တွေ covid19နဲ့ပတ်သက်လို့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျဆင်းမှုတွေ အပါအဝင် ဒီဝေဒနာကို တွန်းလှန်ဖို့ကာကွယ်ဖို့နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားနေကြပါတယ် ဒီဝေဒနာစတင်ဖြစ်ပွားချိန်ကစပြီး လူအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖြစ်လာမှုကိုတားဆီးနိုင်ဖို့ကိုလည်း contact personရှာဖွေရတာတွေ ရောဂါဖြစ်ပွားသူရဲ့ ဇစ်မြစ်ကိုလိုက်ကြည့်ရတာမျိုးတွေနဲ့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ် အစုလိုက်အပြုံလိုက်ကူးစက်လိုက်ပြန်ငြိမ်လိုက် ပြန်ကူးစက်လိုက်နဲ့ အခုဆိုမြန်မာပြည်မှာလည်း တတိယလှိုင်း အန္တရာယ်ကို သတိထားစောင့်ကြည့်နေရတာဖြစ်ပါတယ်…
သင့်မှာစိတ်ကျဝေဒနာခံစားနေရတဲ့သူငယ်ချင်းတယောက်ရှိနေပါလား? ဒါဆိုရင်တော့သင်တယောက်ထဲမဟုတ်ပါဘူး။ အမျိုးသားစိတ်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းရဲ့ ခန့်မှန်းချက်အရ အမေရိကန်ရဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ရရာခိုင်နှုန်းခန့်က စိတ်ကျဝေဒနာကို ခံစားနေရပါတယ်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းမှ ကလေးလူကြီး သန်း၃ဝဝခန့်ဟာစိတ်ကျဝေဒနာခံစားနေရသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ပုံဖြစ်နည်းမတူညီကြလို့ တစ်ချို့က စိတ်ကျလို့ကျမှန်းမသိဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေကိုကြည့်ရတာ -ဝမ်းနည်းနေတဲ့ပုံစံ -အနာဂတ်အတွက်မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေတဲ့ပုံစံ -ကိစ္စတစ်ခုခုအပေါ်အဆိုးမြင်နေတဲ့ပုံစံ -သာမာန်ထက်စကားပြောဆိုရခက်ခဲနေတဲ့ပုံစံ -အလွယ်တကူစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံတွေရှိနေရင်တော့ စိတ်ကျဝေဒနာအစပြုနေပြီလို့သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်။…